Render Crowds™: A customised CG simulation workflow – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » သတင်း » တစ်ဦးကစိတ်ကြိုက် CG ခြင်း simulation လုပ်ငန်းအသွားအလာ: လူအုပ်™ Render
တစ်ဦးကစိတ်ကြိုက် CG ခြင်း simulation လုပ်ငန်းအသွားအလာ: လူအုပ်™ Render
တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်း tools များ၏ suite ကိုနှင့်ထုံးစံ In-အိမ်သူအိမ်သား Workflows အသုံးချဖို့, ™ဖန်တီးမှုစတူဒီယိုမှာ SBLabs R & D အသင်းထံမှစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်လူအုပ် Render Saddington Baynes.
Render လူအစုအဝေး ဖန်တီးမှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခွက်တဆယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်များ၏နယ်နိမိတ်တွန်းလိုသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုခြင်း Render လူအစုအဝေးတစ်မြင်ကွင်းတစ်ခုတစ်ခုဝေဟင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ပုရွက်ဆိတ်အရွယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတ်ကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့လူနေထူထပ်နိုငျသညျ။ သူတို့ရဲ့ပုံစံ, ကွက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်အပြည့်အထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, သူတို့အလွယ်တကူမဆိုအနုပညာ-directional ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းရန်ညွှန်ကြားထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုပြီးသားထိုကဲ့သို့သော Abbvie AT & T, Aflac နှင့် Cheerios အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်ကမွေးစားခဲ့သည်။Render လူအစုအဝေး ဇာတ်ကောင်လည်း cooly လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပုံနှိပ်ကြော်ငြာတွေအတွက်ရှိုးသို့မဟုတ်ကျောက်လှဲချခြင်းနှင့်တစ်ဦးအဘို့အပေါက်ကွဲခဲ့ခံရ, သီခငျြးဆိုနှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက်ခုန်စေနိုင်ပါတယ် အထူး FX စီးပွားဖြစ်။
အနုပညာဒါရိုက်တာတစ်ကြိုဆိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ;Render လူအစုအဝေး ဒါဟာပထမဦးဆုံးစိတ်ကူးနေသည်အဖြစ်အတိအကျမယ့်မြင်ကွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အပြည့်အဝဖန်တီးလွတ်လပ်မှုကိုနိုင်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတ်ကောင်မူလ '' ကို virtual ရိုက်ကူး '' ပြီးနောက်, ဖန်တီးမှုများကိုထိရောက်စွာသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပုံရိပ်သစ်မူကွဲကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု, repositioning နှင့်ပြန်လည်ပုံစံများအတွက်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
Service ကို developer များ
Render လူအစုအဝေး CGI နှင့် FX အနုပညာရှင်များကြွယ်ဝအဖွဲ့အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်နှင့်ကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အထူးကုကနေဓာတ်ပုံပြပွဲအလင်းရောင်ကျွမ်းကျင်သူများ, Animation နဲ့ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်နာများမှ: ဖန်တီးမှုစတူဒီယို Saddington Baynes-အစွန်းလုပ်ကြံသောအားဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ပရိသတ်တွေတစ်ကမ္ဘာလုံးရွှေ့ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်ကြော်ငြာဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျိမ်း Digby ဂျုံးစ်, Saddington Baynes မှာအလုပ်အမှုဆောင်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ:
"Render လူအစုအဝေး ဖန်တီးမှုအကျဉ်းတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်များအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ခွက်တဆယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာ၏စုစည်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ဝေးလံသောဇာတ်ကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, running ခုန်သို့မဟုတ်ပင် (idling) တုန်းပဲရပ်နေစဉ်တွင်အလေးချိန်ပြောင်းလဲနေကြသည်အခါ, ကအားလုံးကိုသဘာဝအလျောက်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်မောင်းထုတ်ရန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲ၏အမှန်တကယ်ရွေ့လျားမှု-ဖမ်းယူနိုင်ခြင်း၏ဒေတာဘေ့စပေါ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အနီးကပ် ups နှင့်အတူအခြားအစွန်းရောက်ခေါ်ဆောင်သွားနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အများဆုံး minuscule ဖမ်းယူအကြောင်းကိုင်: အသားအရေပေါက်, ဒဏ်ငွေဆံပင်နှင့်အရေပြားစဆင်း "။
တစ်ဦးကဆေးဝါးအစက်အပြောက်, ထုံးစံ Simulator ကိုသုံးပြီးကာတွန်းကား။ အဆိုပါအေဂျင်စီနှစ်ခုလုံးလိုအပ် HD အဆိုပါကာတွန်း built-in ခံရမျက်နှာများအဖြစ် (16,000 px ထိသတ်မှတ်ထား) စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုပြားများအတွက်စူပါက high-resolution ကိုပုံနှိပ်ကြော်ငြာဗီဒီယိုက။ ဇာတ်ကောင်နှင့်သူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်း၏သက်သက်အရေအတွက်ကနဲ့ပေါင်းစပ်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အဆင့်, ချွတ်ဆွဲထုတ်ဖို့အနုပညာရှင်တွေများအတွက်မိုးသည်းထန်စွာတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးမြင်ကွင်းတစ်ခုဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
AT & T က
ယခင်ကအကြီးအအောင်မြင်မှုရဲ့ AT & T ကများအတွက်အများအပြားနေဆဲပုံရိပ်စီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ဘဲလျက်, ဒီ Saddington Baynes အဘို့အခွင့်အလမ်းခဲ့တဲ့ဒီပြောင်းလဲနေသောဒစ်ဂျစ်တယ်အလံကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အတူမျိုးစုံပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြပါ။ ဒီမှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု loop ဗီဒီယိုထဲမှာဆက်လက်နှင့်သရုပ်မှန်ထိန်းသိမ်းခြင်း, လာမယ့်တဂရပ်ဖစ်လိုဂိုကနေဇာတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချောမွေ့စွာစီးဆင်းမှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အလားတူပင် Render လူအစုအဝေး ပြပွဲစီမံကိန်းရုပ်ထု၏အောင်မြင်မှုကိုအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်, အယူအဆရေးရာ VFX အရေးယူရိုက်ချက်များများအတွက်ကတိပေး။ ကင်မရာကိုတစ်ဦးအနီးကပ်တက်ပုံတူ၏စကားကိုနားထောငျအတိတ်အားပွတ်ဆွဲနှေးတဲ့အခါမှာ, တကရိုက်ချက်အပေါငျးတို့သထင်ရသော infinitesimal အသေးစိတ်ကိုပြည့်စုံတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုအမှန်တကယ်စစ်မှန်သောသည်အဘယ်အရာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့သဘောသဘာဝရဲ့ရှုပ်ထွေး algorithm ကိုသိတယ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်မျက်စိကအစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်ယုံကြည်နေသောရှုပ်ထွေးတံခါးခုံ, လွန်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကို virtual သွန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမွေးသောအရာထဲကနေအားလုံးထောင့်ကနေအမြင့်ဆုံး res အသေးစိတ်အတွက်အခွက်တဆယ်မော်ဒယ်တစ်ဦးအုပ်စုခွဲဒုတိယဖမ်းဆီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable စကင်ဖတ်ဖို့ 3D တိုးတက်လာ, "ဂျိမ်းစ် Digby ဂျုံးစ်ကရှင်းပြသည်။
ခရစ် McMahon အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Striding က forward: R & D နှင့်စမ်းသပ်ဆဲ VFX - နိုဝင်ဘာလ 23, 2017
NIM Labs က NIM 2.7 လွှတ်တင် - အောက်တိုဘာလ 24, 2017
တစ်ဦးကစိတ်ကြိုက် CG ခြင်း simulation လုပ်ငန်းအသွားအလာ: လူအုပ်™ Render - စက်တင်ဘာလ 14, 2017
ယခင်: DPA ရဲ့ 25th နှစ်မြောက်ပိုမိုနီးကပ်စွာ World Tour က၎င်း၏ဒုတိယခြေထောက်စတင်သည်နှင့်ဥရောပသို့တိုးတက်လာလိုက်ပါ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "™လူအုပ် Render: တစ်ဦးကစိတ်ကြိုက် CG ခြင်း simulation လုပ်ငန်းအသွားအလာ" ။ http://www.broadcastbeat.com/render-crowds-a-customised-cg-simulation-workflow/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။